जातिय बिभेदका सवालमा तपाईंको अडान के हो ? | NepalDut
राजु क्षेत्री पोखरा
जब प्रश्न तपाईतिर सोझिन्छ तब एकाएक तपाई अद्भुत क्रान्तिकारी जस्तो देखिनुहुन्छ । वास्तबमा यो तपाईंको खोक्रो आडम्बर मात्र हो ।
म कम्युनिष्ट होइन । मेरो टोलमा कम्युनिष्टको बाहुल्य छ । कम्युनिष्ट दलित बस्तीमा पनि छन र गैर दलित बस्तीमा पनि । जब संगठन- बिचारको कुरा हुन्छ त्यो बेला मार्क्सवादी आदर्शको कुरा गैर दलितले सुन्दर तवरले ब्याख्या गर्छन । कम्युनिष्टको थेगो नै छ – दुनियाँमा जम्मा दुईटा जात हुन्छ । तर जब बैठक चल्दै गर्दा तपाईंको अगाडी चिया आइपुग्छ अनि तपाईंको ब्राह्मणबादले बहाना खोज्छ ( आज धेरै चिया खाइयो, ग्यास्टिकले सताएको छ । भो म नखाम है )
मतलब , यस्तो छ हाम्रो समाजको अग्रगामी शक्तिको सामाजिक चेत । अरु छोड्नोस — कम्युनिष्ट पार्टीका दुबै जना सदस्य छन तर बाहुनका घर मोरो पर्दा दलितको हातको भेटी चल्दैन ।
अरु छोड्नोस — कम्युनिष्ट पार्टीका दुबै जना सदस्य छन तर बाहुनका घर मोरो पर्दा दलितको हातको भेटी चल्दैन ।
केहि समयअघि आमाको देहावसान भयो । सहानुभूति र साथका लागी धादिङबाट भाइ अनिल बिश्वकर्मा घर आयो । उ म सगै बसेर मेरो किचनमा खाना खायो । म संगै सुत्यो । १३ दिनको दिन पारी गाउँबाट लाहुरे सार्की र बुद्दी सार्की आए । करिब २ दशक गाउँको कम्युनिष्ट राजनीति गरेका महोदयले मसंग सोधेका थिए , लाहुरे र बुद्दीलाई कता राखेर खुवाउ ?
मैले भने – दाइ अलि सुस्तरी बोल्नोस — पुलिस आएर लग्ला । सायद मेरो मनोभावना बुझेर होला जसरी अरु सबैले बसेर खाएका थिए त्यसरी नै बुद्दी र लाहुरे दाइ पनि बसेर खाना खाइरहेका थिए ।
हिजो – आज हेर्छु तिनै कमरेडहरु उग्र- उग्र शब्दमा जातीय बिभेदका विरुद्ध पोस्ट गरिरहेका छन । हामीभित्रको आडम्बर भत्काउ अनि मात्र हाम्रो समाज सबै जाती- बर्ग बस्न लायक बन्छ ।